Tahotra ny ho very faty Hisitrika ireo mety voan’ny Covid-19…
Misy risika be sy mety hanova ny fihetsiky ny olona ny fandevenana olona matin’ny covid-19 toa fandevenana olona matin’ny pesta ity tahaka izao, indrindra ity rodorodo be sy toa fampisehoan-kery ity.
Hipirina sy mety hijanona any an-trano ny olona na marary aza, satria matahotra ho very faty. Tena mbola tsy zakan'ny Malagasy izany very faty izany, na eto Madagasikara ihany aza no alevina. Tsy mandry ny sainy hoe ny havany tsy milevina ampasan-drazana izany. Vao mainka anefa loza satria ahiana hirongatra io olona maty any an-trano, ivelan'ny hopitaly io. Any ivelany rehefa olona “positif” no maty na inona na inona ireo aretina mitaiza azy dia sokajiana ho anisan’ny matin’ny Covid-19 satria ny fahatongavan’ilay otrikaretina ao amin’ny vantany no nahatonga fahasarotana tamin’ireo aretina efa tao aminy sy mety nitaiza azy, ary nitarika fahafatesana. Ny zava-misy eto amintsika, dia eo am-piandrasana valina fitiliana ny olona iray no maty, ary nivaly ilay izy ka voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina covid-19, saingy ny “fièvre typhoïde" no nahafaty azy fa tsy isan’ireo ambara fa matin’ny coronavirus. Avy eo anefa toa voaviravira tsy avela halevina any am-pasan-draza fa any amin’ny fasam-bahiny. Ny fepetra raisina maneho fa matin’ny covid-19 ilay olona, fa ny ara-panjakana tsy izay satria mampiakatra ny isan’ny maty. Olona nitondra ny coronavirus izay hitrikitrihan’ny fianankaviany fa maty noho ny aretina, saingy famonoan-tena no ahian’ny fanjakana fa nahafaty azy. Firifiry izay maty mitsirara eny an-dalambe izay teto Antananarivo sy tany Toamasina izay toerana samy ivon’ny coronavirus ka asa na fifandrifian-javatra ireny na efa ny valanaretina no mamely. Toa tsy misy mpitondra miresaka sy mandinika an’ireny, kanefa tahaka io miseho io ny zava-nisy tany Wuhan Chine tamin’ny fiandohan’ny coronavirus.